Justin Bieber oo London guri kaga kireystay 135 kun dollar, daawo sawirada aqalkaas.
Fanaanka da'da yar ee Canada u dhashay waa Justin Bieber ayaa waxuu guri kaga kireystay magaalada London ee cariga Ingiriiska adduun lacag gaaraya 135 kun oo doollarka mareykanka ah, taasoo lala fajacay.Gurigaan oo ah mid aad u weyn oo ka koobaan 15 qol oo jiif ah, fadhiyo waaweyn , shinee...
Haweeney arooskeeda dartiis 50 kiilo baruur ah iskaga ridday si ay u gashato taaj yar habeenka xafladdeeda.
Haweeney ku nool gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo haley Smith oo aad u buurnaan jirtay ayaa kadib meherkeeda sanad kahor ahaa waxey go'aan gaartay in ay nolosheeda wax ka badasho waxeyna muddo sanad kahor arooskeeda sii bilaawday orod , jimicsi iyo in ay yareyso cuntada ay cun...
Gabar Soomaaliyeed oo darawal gaari Bus-ka ah Norway oo dadaalkeeda la amaanay.
Saxaafadda dalka Norway ayaa waxey maalmahan hadal haysay qisada Caa'isha Cali Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Oslo ee dalka Norway , halkaasoo ay ka noqotay Aisha gabadhii u horeysay ee Soomaliyeed ee darawal ka noqota gaari dheer oo baska dadweynaha rakaabka qaada i...
Shahruk khan filimkiisa Raees oo la sheegay goorta uusoo baxayo .
Clint Eastwood oo jilaya filim burcad badeeda Soomaaliya ku saabsan.
Cayaaryahanka Kubadda cagta u dhashay Portugal una cayaara kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa ku qabsaday gabar model ah oo xayeysiisa dharka dabaasha oo lagu magacaabo Kristina Peric taas oo kasoo jeeda dalka Serbia. Gabadhaan modelka ah ayaa waxey u egyahay oo aan laga aqoon haweene...
Daawo Ranbir Kapoor iyo Anushka Sharma oo cayaar xiiso leh kusoo bandhigay heesta fiimka Break Up ee Ae Dil Hai Mushkil
Jilayaasha Bollywood ee kala ah Ranbir Kapoor iyo Anushka Sharma ee wada jilay filimka Break Up sii deeyay heesta ugu shidan filimka dhanka qoob ka cayaarka. Heestaan oo lagu magacaabo Dil Hai Mushkil ayaa noqotay mid xiiso badan leh qaabka ay u jileen oo ay ku dabaal dagayeen , dhanka muusiga...
Janet Jackson oo 50 jir uur ku yeelatay. Nin Muslim taajir ah ayay u dhaleysaa.
Fanaanada u dhalatay Mareykanka ee Janet Jackson ee la dhalatay fanaankii caanka ahaa Michael Jackon ayaa waxey xaqiijisay wararka ayaamahan la hadal hayay ee ahaa in ay uurkii u horeeyay yeelatay ayna caloosha ku siddo wiil xiligaan oo ay 50 jir tahay taasoo ay kusoo bandhigtay wargeyska caanka ah...
Fanaanada codka macaan ee u dhalatay Kanada ee Celine Dion ayaa waxey shaacisay in aysan waligeed dhunkan nin aanan ninkeeda aheyn. Celine Dion oo 48 jir ah oo caan ku aheyd heestii My Heart will go on ee filinkii Titanic ayaa ka sheekeyneysay xeriirka jaceyl iyo guurka mudada dheer ka dha...
Fanaanada Xafsa Xubi ayaa soo saartay heestan Jirab oo ay ah mid daadis ah , Heestan ayaa ah mid si casriyeysan loo duubay ayaa waxa ku faro yareystay director ka reer Holland ee Raage Cali Dheere. Heesta ayaa la duubay xili qaboow iyadoo muuqaalka heesta laga dhigay mid la socda style ka Yurub...
Donald Trump oo Hillary Clinton ugu hanjabay inuu xabsiga ku tuuri doono haduu noqdo madaxweyne.
Dooddii kululeyd ee xalay ee uu dhaxeysay labada musharax ee u taagan madaxnimada dalkaasi Mareykanka ee kala ah Donald Trump oo ka socday xisbiga Jamhuuriga iyo Hillary Clinton oo ka socotay xisbiga dimoqoraadiga ayaa madaxa isla galay iyadoo erayo kulkul la is dhaafsaday , waxaana ay Hillary...
Akon oo shiday qaaradda Afrika kadib markuu koronto siiyay 80 milyan oo guri.
Fanaanka caanka ah ee Mareykanka kana soo jeeda Senegal ee lagu magaaabo Akon ayaa koronto siiyay 80 milyan oo qoys oo Afrikaan ah kuwaasoo u u shiday dalalkooda.Akon oo haatan fanka kaga wareegay dhanka gargaarka ayaa waxuu usoo guuray qaarada Africa halkaasuu ka bilaabay qorshaha mashruuc uu ugu m...
Abwaan Sangub oo Xanuunsanaya, lana Dhigay Isbitaal
Abwaanka ruugcadaga ah ee Abdulaahi Sangub ayaa lasoo sheegaya inuu xanuunsanayo. Sangub ayaa la dhigay isbitaalka Digfeer ee magaallada Muqdisho.Xubnaha isbitaalka ayaan shaacin sababta loo dhigay abwaanka isbitaalka, waana ay ka gaabsadeen ayagoo dhowraya xuquuqda gaarka ah ee fanaanka iyo caafima...
Farixiya Kabayare iyo Nimco Dareen oo baraha bulshada isku afalagaadeynaya
Labada fanaanan oo caanka ah Farxiya Kabayare iyo Nimca Dareen ayaa aflagaado isku dhaafsaday baraha bulshada ku kulunto, khaasatan Facebook. Xurguftan dhex martay labada hablood ayaa ka bilaabatay muuqaal ay ku wada jiraan Farxiya Kabayare iyo majaajileystaha caanka ah Happy Khalif. Muuqaalka...
Anupam Kher oo taageeray in Jilayaasha Pakistan u dhalatay laga mamnuuco Bollywood, taas oo hirgashay
Qilaaf xooggan oo taariikh dheer jira oo ka dhaxeeya dalalka India iyo Pakistan ayaa waxaa uu saameyn ku yeeshay arrimaha fanka iyo aflaamta iyadoo sida la ogsoon yahay shirkada filimada dalka India ee Bollywood ay jilayaal kasoo jeeda dalka Pakistan ay filimo ku sameeyaan kana mid ahaay...